Diiwaangalinta dugsiga marka koobaad: Qaabka ugu dhakhsiyaha badan, ee ugu haboon diiwaangalinta dugsiga iyo adeegyada taageerada gaarka ah ee Luuqada waa in lasoo maro DiscoverBPS. Waxaan qoraynaa cunugaaga waxaana uqabanaynaa xili uu qaato tijaabada luuqada ingiriiska. BPS waxay kaadoonasaa inaad isqorto inta lagu jiro mudada isdiiwanagalinta muhiimka, aadna iskuqorto qaadashada imtixaanka sida ugu dhakhsaha badan, bisha Sebteembar kahor marka cunugaagau galaayo dugsiga. Ayadoo laraacaayo natiijada imtixaankaas, degmada ayaa kaataageeraysa doorashada dugsiga.
Liiska SEI (Hooy Barashada Ingiriiska) Dugsiyada BPS luuqad ahaan
Liiska Dugsiyada BPS ee Labada Luuqadood/Barashada Labada Qaab ee Luuqada
Kawaran Adeegyada EL ee laga baxsho dugsiyada kale ee BPS?
Iskuulada kale sida iskuulada Charter ka ah, iskuulada madaxa banaan ee gaarka loo leeyahay, iyo iskuulada diinta gaarka looleeyahay mid waliba waxay raacaan diwaankooda u gaarka ah iyo isqorista habraaca adeegyada luuqadaha. Xaqiiji inaad dugsiga lajoogto dhamaan mudada hanaanku socdo.
Ilaha kale ee aad caawimaada kahelayso